Aza mikorapaka ! – MyDago.com aime Madagascar
Aza mikorapaka !
Ny vorompotsy tsy mandao ny omby, ny fandiafasika tsy diso fitàna, ny kitsikitsika tsy miala aman-kazo avo, ny lohasaha fandrian’ny moka, ny helo-drano fandrian’ny mamba, ny Andriamanjaka fandrian’ny didy, ary ny olombelona fandrian’ny saina. Dia inona no ilazantsika ny antony namoronana ny biby ho teo alohan’ny namoronan’ny Mpamorona ny zanak’olombelona ? Satria misy ny biby nivoatra ka nanakaiky ny fisainana sy ny fahazaran’ny olombelona, saingy mamoa-tsampona raha ny olona no mivadika ho biby (mandrorona), manao fanahim-biby, bibibiby loha. Dia tonga ity ny Asabotsy ka any Sandton no fandrian’ny SADC, any no mifikitra tsy miala ny saina aman’eritreritry ny Gasy. Any no mitoetra ilay vorompotsy tsy mandao omby, any no hisainana ilay tsy ho diso fitàna amin’ity tetezamitan’ny Gasy efa nasidina any amin’ny avo indrindra ity. Satria ny sikidin’Ibesafary dia tsy masina an-taniny ka nosorana ho Andriamanjakan’ny Gasy ny SADC ary hamoaka ny didiny, ny tiany ho lazaina, ny tian-kano tsy tian-kano. S’akory izay fa niseho nilay kanefa tsy nilay ! Mihambo ho mahay miresaka kanefa miboredika sy mamerimberin-teny toy ny biby.
Tsy misy na iray aza eo amin’ireo mpanao politkan’ny Gasy ka hanana fahefana, na teny, na koa hery isan-tokony ka hanakana izay ho lazain’ity SADC ity. Aza mikoropaka intsony fa aretina notadiavina ny antsika, bongo maso noteren-tsetroka, tongo-bakivaky noho ny fitiavan-dia anaty zavona. Tsy nahay nifanala tsikoko ka ny hafa no navela hifosa sy hitsikea ny isan-tokony. Im-piry moa ireo mba hany « tsara sitra-po » no niteny fa aleo mifanaraka dia mba mankatoa izay fifanarahana sisa no ataon’ny vahiny ? Im-piry ny sehatra iraisam-pirenena no nandany rora tamintsika ? Tsy efa nananatra ny firenena mikambana, ny vondrona Eraopeana, ny vondrona Afrikana fa tokony hamolavola ny « lalana iraisana » ny firenen’ny Gasy ? Tsy efa maromaro ihany ny sazy ho fanerena ny saina aman’eritreritra teto ? Tsy efa maro ny f(if)amonoana sy ny f(if)anenjehana isaky ny vodimototra ? Tsy efa nifanameloka ? Tsy efa nifanilaka ho sakana ? Toy ny ankizy nanao fangalam-piery ny firenena nandritra ny tetezamita « vakiraoka », ka samy afa-po sy afa-nenina nandritra ny fotoana maharitra. Andao hirosoana ny tetezamita araka ny didin’ny mpamoaka didy, sao sanatria hanasan’ny olona tanana eto no hiafaràny.
Aza mihetsika intsony fa tratran’ny ambanambana izao ny firenentsika, aza mitelin-drora intsony fa ho tapa-tenda, aza mihambo ho mahavita irery ny firenena intsony na ny tsy afa-mody, na ireo mivonon-ko tompony. Mihomana fa hifampiandry amin’ny kibay indray ny Gasy ! Hifampibaikobaiko amin’izay tokony hodiavina, hifamingana, hifamono. Manino no mamonomono biby Valy a ! Ny Biby namantsika, ny biby havantsika. Na olona mifanahim-biby aza dia fantraro fa mandia ny tany ka tsy maintsy solafaka. Rehefa afa-nenina tamin’ny fombafomba maro hatrizay fotoana lava izay dia asehoy fa lehilahy lehibe matanjaka ara-tsaina ka vonona ny hanaiky ny didin’ny Andriamanjaka vaovaon’i Madagasikara isika mianakavy : Mety io dia noho ny mpanao politka, tsy mety fa hampiady dia noho ny mpanao politka ihany. Tsy misy hifananaovana teny marary fa mila milamina sy mifitsaka rehefa handray ny hafatra avy any an-tendrombohitr’i Sandton. Araho ny didiny dia tsy ho melohana « isika ». Don’t korapaka !
Auteur Ony RambeloPublié le 11 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique, Société
Précédent Article précédent : Conférence de presse 10 jona 11
Suivant Article suivant : Banga ny toeran’i Madagasikara !